Iincwadi zeMidlalo yokuLamba: uguquko loncwadi. | Uncwadi lwangoku
Iincwadi zeMidlalo yokuLamba
UJuan Ortiz | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, Iintlobo, Iincwadi, Inoveli, Ezahlukeneyo
Indlala Imidlalo yeencwadi.
La Impumelelo kunye neyaziwayo trilogy ye Iincwadi ze Imidlalo yokulamba yabhalwa nguSuzanne Collins, umbhali wemidlalo yaseMelika ozelwe eHartford, eConnecticut, ngo-Agasti 10, 1962. Uyintombi kaJane noMichael Collins, indoda yasemkhosini e-United States Air Force. Waqala izifundo zakhe zeDrama kwiYunivesithi yaseIndiana, kamva walugqiba uqeqesho kwiYunivesithi yaseNew York.
Ngaphambi kokuzingcwalisa nge Imidlalo yokulamba (2008) Imidlalo yeNdlala: UkuBamba uMlilo (2009) kunye Imidlalo yendlala: Ukuhlekisa (2010) Olunye lolona hlaselo lubalaseleyo lwamva nje, UCollins ukwavelise amabali abantwana kwimidlalo yeTV. ukusukela ebutsheni beminyaka yoo-1990. Oku kubandakanya Ibhere elincinci y Ibali likaClarisa.
1 Iwaka leminyaka elitsha leCollins: amabali, uloyiso kunye nokuqhekeka
2 Ukuphefumlelwa kunye nesiqwenga seMidlalo yeNdlala
2.1 Urhulumente wobuzwilakhe wokwenene
3 Ukuphuhliswa kweencwadi
3.1 Imidlalo yeNdlala (2008)
3.2 Imidlalo yeNdlala: UkuBamba uMlilo (2009)
3.3 Imidlalo yeNdlala: Ukuhlekisa (2010)
4 Ukuhlekisa, imovie, ukuvala okungathandekiyo
Iwaka leminyaka elitsha leCollins: amabali, uloyiso kunye nokuqhekeka
Ngokungena kwewaka leminyaka elitsha UCollins wabhala UGregor, uthotho lwabantwana oluxelela umhlaba omangalisayo igcwele iimpuku kunye nezinambuzane ezithethayo kwaye yahlulahlulwe yaba ziihlanu Iindawo ezisezantsi (2003) Isiprofeto sesiBini (2004) Isibetho esikhulu (2005) Imfihlelo emnyama (2006) kunye Isiprofeto sokugqibela (2007).
Kuyabonakala, Ukufika kweMidlalo yeNdlala kwi-cinema kwaphawula ukutshintsha kwikhondo likaCollins. Xa i-trilogy yaziswa kwiscreen esikhulu nguGary Ross (2012) kunye noFrancis Lawrence (2013, 2014 no-2015), umhlaba wanyikima. Oku bekungekho ngengozi, i-saga ibinenkwenkwezi ye-stellar cast ekhokelwa ngu-Oscar ophumeleleyo u-Jennifer Lawrence.
Ngo-2013 wapapasha Unyaka ehlathini, ibali labantwana elibonisa ibali lobomi bakhe Apho ebalisa amava entombazana eyayilinde utata wayo, eyaya emfazweni eVietnam. USuzanne Collins wayetshatele kuCharles Pryor iminyaka engama-23, ukusukela ngo-1992 ukuya ku-2015. Umtshato wavelisa abantwana ababini.
Ukuphefumlelwa kunye nesiqwenga seMidlalo yeNdlala
UCollins uxele kudliwanondlebe olwahlukeneyo ukuba waphefumlelwa ngumdlalo kaSpartacus. Umbhali ubandakanye izinto ezivela kwiintsomi zamaGrike namaRoma ezinje ngethi kaLesus. Ngokulandelanayo, Imidlalo yokulamba Ngabalinganiswa abanenkcazo abaneminyaka yobudala bobutsha. Iimpembelelo eziphawuliweyo zokhuphiswano lwama-gladiator aseRoma adluliselwe kwixesha elingaqinisekanga kunye ne-dystopian ziyabonakala. Hayi ilize indalo yakhe iphakathi kwezona ncwadi zibalaseleyo zexesha elizayo.
Ipowusta ye-movie «Imidlalo yeNdlala».
Eli yelenqe lijolise ekuchazeni indlela urhulumente we-PANEM ohlwaya ngayo imvukelo ngesohlwayo esisoyikisayo sonyaka esenziwa kumabonwakude. Sisizwe esenziwe zizithili ezilishumi elinambini eziseleyo zemfazwe yamakhaya yenyukliya eMelika yenkulungwane yama-XNUMX. Ukulungiselela le njongo, isithili ngasinye sinika abafana abancinci abaphakathi kweminyaka elishumi elinambini neshumi elinesibhozo, umntu obhinqileyo nomntu oyindoda (imbeko).
Abameli besithili ngasinye bathunyelwa kwibala lemidlalo apho balwa de kube sekufeni kwaye ngumntu omnye kuphela onokuphila. Ophumelele umboniso wegazi uvuzwa ngemali, indlu engcono kunye nokunethezeka, ngaphandle kwendleko zomzimba nezengqondo ezinokuthi zibandakanye ukufumana olo loyiso.
Urhulumente wobuzwilakhe wokwenene
nayo, USuzanne Collins uchaza urhulumente wobuzwilakhe nocinezelayo kaMongameli uSnow, olawula abantu ngokusoyikisa nangesixhobo esiqhelekileyo soozwilakhe ebomini bokwenyani: ukutya. Kwangokunjalo, inkqubo yodidi oluphezulu kunye nenqanaba lentlalontle lithanda indlela yokuphila ye-Capitol kunye nezithili zayo ezikufutshane ezonakalisa izibonelelo kunye nentlalontle yeendawo ezikude kakhulu.
Ngokwahlukileyo, akunakwenzeka ukuba ungaziva uvelwano kunye nemfesane kulowo uphambili, uKatniss Everdeen, njengoko ezinikezela "njengomrhumo wokuzithandela" ukusindisa udadewabo omncinci, uPrim, ekubulaweni okuthile. UCollins ubonakalisa ngeqhawekazi lakhe ukungqinelana okuqinisekileyo ngokujongana nezihloko ezinje ngezothando, isenzo, ukurhanela, ubuqhetseba, kunye nezopolitiko ngendlela eneenkcukacha kunye nenomdla.
Imidlalo yokulamba (2008)
Kwincwadi yokuqala, umfundi uxhonywe yingxoxo enomtsalane: bamba abantu abangama-24 ngaphakathi kwendawo ebiyelweyo elungiswe ngemigibe yokufa, apho injongo yomntu ngamnye ikukubulala abanye. Isenzo sikamabonwakude sibonisa umxube ogqibeleleyo wobundlongondlongo kunye nenkohlakalo yoluntu oluzayo, kodwa ngokubhekisele kwimbonakalo yobuninzi bengcamango yoluntu.
Ukuphela okungalindelekanga kwesavenge sokuqala kutyhila inkanuko phakathi kukaKatniss noPeeta. Bakulungele ukuzincama kunokuba babulalane. Lo mthetho uqinisekisa isimo sokungabi nantlonelo sabalinganiswa abaphambili ebusweni bolawulo olungenanceba.
Imidlalo yeNdlala: UkuBamba uMlilo (2009)
Kwincwadi yesibini, eyona njongo yesaga yonke iqala ukutyhilwa: inguquko, oku ukwenze ngendlela echuliweyo. Izenzo zenkohliso zikaKatniss noPeeta zinike ithemba kubantu bezithili ezingalondolozwanga yiCapitol.
Ngeli xesha, omnye umboniso owoyikekayo ubekwa ngaphakathi kwibala lemidlalo apho abaphumeleleyo kukhuphiswano oludlulileyo bathatha inxaxheba. UCollins ulawula ngobuchule ukugqithisela kumfundi uluvo lweyelenqe elizayo apho yonke into ijikeleze khona eKatniss (ngaphandle kokuqonda ukuba kwenzeka ntoni). Ezincwadini, iyelenqe libonakaliswe ngendlela efihlakeleyo ngakumbi kunakwimiboniso bhanyabhanya.
USuzanne Collins, umbhali weMidlalo yeNdlala.
Imidlalo yendlala: Ukuhlekisa (2010)
Kwincwadi yesithathu uguquko ngokuqinisekileyo lwenziwe. I-Katniss isetyenziswa licala ngalinye ukufezekisa iinjongo zazo. Icebo lokujija liyonwabisa kakhulu. Okokuqala, ukuhlaselwa kukaPeeta uKatniss ngenxa yokuhlukumezeka kwengqondo awayekuyo ngaphambi kokuhlangulwa. Emva koko, ngaphambi nje kokuwisa ikhephu, uPrim ubulawa kukuqhushumba.
Okwesithathu, uSnow utyhila inyaniso kuKanniss. Uyamxelela ukuba iibhombu ezabulala udade wabo yayingengomyalelo wakhe, kodwa yayingu-Coin. Okokugqibela, uKatniss uziphindezela kuCoin, umphathi-mkhosi ophikisana nolawulo. Oku kwenzeka embindini wesinye isenzo sikarhulumente esidlala kumabonwakude apho imida yobubi babantu ihlala iphambili- kwakhona.
Ukuhlekisa, imuvi, ukuvalwa okuchulumancisayo
Ukuhlekisa yahlulwe yangamacandelo amabini eefilimu eziye zadika ngokuthe ngcembe (ngakumbi icandelo 2) njengoko idenouement isondela. Nangona kunjalo, oku akwenzeki ezincwadini ngenxa yokubaliswa ngokupheleleyo, kugcwele ukumangaliswa okungapheliyo. Xa kuthelekiswa, izicatshulwa zinomdla ngakumbi kwaye iarc yomlinganiswa ngamnye igqityiwe ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » into engeyonyani yebuchwepheshe » Iincwadi zeMidlalo yokuLamba
UWashington Irving, yenye yeendlela zakudala zaseMelika
Ubuso bokugqibela boMhloli Maigret: URowan Atkinson